Maraykanka oo iska fogeeyay in Safiirkooda Syria uu la kulmay Kooxo Hubaysan. – SBC
Maraykanka oo iska fogeeyay in Safiirkooda Syria uu la kulmay Kooxo Hubaysan.
Dowlada Maraykanka ayaa iska fogaysay eedeyn ay Syria ugu jeedisay in Safiirka Maraykanka ee Booqday Magaalada Xamaah uu la kulmay Kooxo Mucaarad ah oo hubaysan,iyadoona uu ku dhiiri galiyay in ay sii wadaan rabshadaha looga soo horjeedo Dowlada Syria.
Aqalka Cad ee looga taliyo Dalka Maraykanka ayaa sheegay in u jeedka socdaalka safiirkooda uu ahaa in uu u kuur galo xaalada banaabaxayaasha iyo weliba tacadiyada loo gaystay dadka isbadal doonka ah ee ku banaabaxayay Xamaah.
Syria waxaa ay sheegtay in Maraykanku uu fara galin qaawan ku hayo dalkooda,iyadoona uu abaabulayo dad fidna wadayaal ah oo isku dayaya in ay ceeb u keenaan kala dambaynta iyo weliba amaanka ka jira wadanka Syria.iyadooba Robert Ford uu la kulmay Kooxo hubaysan.
Banaabaxyo xoogan oo maalintii Jimcaha ka dhacay Syria ayaa saraakiil ka tirsan kuwa xuquuqda Aadanaha ee dalkaasi ay sheegayaan in ay tirada dhimashada ee ka dhalatay rasaasta ay fureen Ciidamada Amaanka ay si aad ah u korortay.
Madaxweynaha Syria Bashaar Al asad waxaa uu horay u sheegay in rabshadaha ka jira dalkii ay ka dambeeyaan Dowlada uu Maraykanku ugu horeeyo,iyadoona sida madaxweynuhu sheegay ay abaabulayaan Kooxo hubaysan oo si xoog ah kula wareega talada dalka.
Rabshadaha ka socda Syria oo sii baahaya ayaa keenay in ay dad fara badan ay ku nafwaayaan,waxaana ay weli Dowlada Syria isku dayaysaa in ay si xooga ah kala dambaynta ay dalkaasi ugu soo celiso.